GBP/USD: Narrow Range Trading
GBP/USD သည်ကျဉ်းမြောင်း trading range တစ်ခုဖြစ်သော 1.2850 နှင့် 1.2765 တို့ကြားတွင် ငြိမ်သက်စွာ အရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်နေပါသည်။ အကယ်၍ အထက်ပါ range အပေါ်နှင့် အောက်များတွင်ရွှေဈေး ရောက်ရှိခဲ့ပါက ပိုမိုအားကောင်းသော Breakout များဖြစ်လာနိုင်ချေရှိပါသည်။ ယခုလက်ရှိညွှန်ပြချက်များအရ ဆိုလျှင်ရွှေဈေးသည် ယခုထက်ပိုမို တက်သွားနိုင်ခြေရှိပြီး အပေါ်ဖက်သို့ Breakout ဖြစ်နိုင်ခြေများရှိနေပါသည်။
GBP/USD is trading withinavery narrow range between 1.2850 and 1.2765. It would be wise to watch out forabreakout above and below the range trading area. As of current indication, market is likely to continue its uptrend.